अनैतिक सम्बन्ध बारे बताईदिने भनेपछि देवरद्धारा भाउजूको हत्या प्रयास - Rajmarga
अनैतिक सम्बन्ध बारे बताईदिने भनेपछि देवरद्धारा भाउजूको हत्या प्रयास
रौतहट । रौतहटमा अनैतिक सम्बन्धका कारण देवरले आफनै भाउजूको हत्या प्रयास गरेको खुलासा भएको छ। जिल्लाको साबिक जेठरहिया गाविस ९ हाल यमुनामाई गापा १ बस्ने धनै सहनीको छोरा राजुकुमार सहनीले आफनै भाउजुको हत्याको प्रयास गरेका हुन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि उक्त रहस्यको खुलासा गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सोही अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्त राजुकुमार सहनिलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । सहनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दाईको श्रीमती पुनमकुमारी सहनीमाथि धारिलो हतियार ९खुकुरी० प्रहार गरि हत्याको प्रयास गरेको डिएसपी ज्ञानकुमार महतोले बताएका छन् । हाल घाइते पुनमको वीरगञ्जस्थित एलएस न्युरो अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । घाइते पुनमको टाउकोको अप्रेशन गर्नुपर्ने डाक्टरले जानकारी दिनुभएको डिएसपी महतोले जानकारी दिए । आरोपी राजु सहनीउपर ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्तागरी जिल्ला अदालत गौरबाट म्याद थपगरी अनुसन्धान भैरहेको डिएसपी महतोले बताए ।
सोमबार राती पुनम सहनी छोरीसहित आफ्नो घरमा सुतिरहेकी थिइन् । पुनम सुतिरहेको अवस्थामा बिहान ४ बजे अज्ञात ब्यक्ति घरभित्र प्रवेश गरे । एकाबिहानै घरभित्र प्रवेश गरेका उनले पुनममाथि धारिलो हतियार (खुकुरी) प्रहार गरेर घाइते मात्र बनाएनन् केही सामान लुटपाट गरेर भाग्न सफल भएको थियो । घाइते पुनमको सुरुमा सुकदेवचौकस्थित निजि अस्पतालमा उपचार भयो तर त्यहाँ उपचार सम्भव नहुने देखिएपछि उनलाई वीरगञ्ज रिफर गरिएको छ । घटनाको सूचना पाएर ईलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका डिएसपी महतो नेतृत्वमा गएको टोलीले घटनास्थलमा सुक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
अनुसन्धान रिपोर्ट सुनाउँदै प्रहरीले भनेको छः ‘अनुसन्धानको क्रममा घाइते पुनमको घरदेखी झन्डै १०० मिटर टाढा बाँसको मचानमा राजुसहित पुनमका चारजना देवरहरु सुतिरहेका थिए । प्रहरीले मचानको तलासी गर्दा राजुको सिरानी छेउमा रगतको टाटा देखिएको र परालमुनी २ वटा ठुलो खुकुरी बरामद गरेको छ ।’
लगतै प्रहरीले राजुलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दा घरायसी बिवादका कारण हतियार प्रहार गरेको स्वीकार गरेका छन् । प्रहरीले स्रोतलाई उदृत गर्दै अभियुक्त राजु सहनीको लामोसमय देखि कान्छी भाउजुसँग अनैतिक सम्बन्ध रहदै आएको जनाएको छ ।
केहिदिन अघि जेठी भाउजू पुनमले सोबारे थाहा पाएर सासू ससुरा र उसको श्रीमानलाई अनैतिक सम्बन्ध बारे बताईदिने भनी देवर राजुलाई थर्काएकी थिईन् । सोही सम्बन्ध बाहिर आउने डरले राजुले भाउजू पुनमको हत्या गर्ने प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ । डिएसपी महतोले घटनामा अभियुक्त राजुको कान्छी भाउजूको समेत हात हुनसक्ने भएको र घटना अनुसन्धानकै क्रममा भएकोले अहिले केही भन्न नसकिने बताए ।
Previous Previous post: जापानमा १९ जना अपांगको हत्या गर्ने यूवकलाई मृत्युदण्ड : भने ‘म हिटलरको फ्यान हुं !’
Next Next post: मनकारी दम्पति भन्छन् : कोरोनाको आसंका भए क्वारेन्टाईनका लागि हाम्रो घर निशुल्क
नक्कली प्रेस कार्ड भिरेर चिकित्सकको घरमा चोरी गरेपछि…
आफ्नै छोराद्वारा बन्चरो प्रहार गरेर आमाबाबुको निर्मम हत्या
सिलिन्डरमा कम तौल ग्यास राखी बिक्री गर्ने पक्राउ
जबर्जस्ती करणी प्रयासको आरोपमा श्रीमान् र जेठाजु पक्राउ
लकडाउनको अवधिमा जबर्जस्ती करणीका सात घटनामा उजूरी
७ वर्षीया छोरीको घाँटी थिची हत्या गरे, आत्महत्या गरेको भन्दै अस्पताल लगे
दरबारमार्ग बलात्कार काण्डका मुख्य अभियुक्त पक्राउ
नदीमा अड्केको यो शव कस्को ? हत्या कि आत्महत्या ?
कविता विष्टको हत्या आरोपमा थप दुई जना पक्राउ
गत वर्ष र आगामी वर्षको बजेटमा यस्ता छन् भिन्नता
कोरोना संक्रमितको शव लैजाँदा शवदाह गृहका कर्मचारी भागेपछि…
नयाँ व्यवसाय गर्न चहानेलाई २ प्रतिशत ब्याजमै पैसा दिइने
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड (पूर्णपाठ)